हरियाे साग र च्याउ खानुका यस्ता अनगिन्ती औषधीय फाइदा, जानिराख्दा राम्रो ! – Khabar Patrika Np
हरियाे साग र च्याउ खानुका यस्ता अनगिन्ती औषधीय फाइदा, जानिराख्दा राम्रो !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २४, २०७८ समय: २२:३२:०७
हामीले दैनिक सेवन गर्ने तरकारी मात्रा मिलाएर पकाउँदा स्वादिलो मात्र हुँदैन, शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै मस्तिष्क पनि बढाउँछ । पोषिलो परिकारले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाएर क्यान्सर, मुटुरोग र मधुमेहजस्ता असाधारण रोगको सम्भावनासमेत हटाउँछ । त्यसैले औषधीय महत्व भएका सागसब्जीका बारेमा सबैलाई ज्ञान हुनु आवश्यक रहेकाे छ र यस्ता रहेका छन् साग र च्याउ खानुका फाइदाहरु:-
हरियाे साग:- नेपालमा रायो, तोरी फापर बेथु मेथी सौँप पालुंगो चौँसुर छ्यापी लसुनका सागका साथै फर्सीका मुन्टा हरियो प्याज, निगुरो आदि हरियो सागको रूपमा खाइन्छ ।
यी सबै सागमा पाइने पोषक तत्व फरक–फरक छन् । तर, समान रूपमा क्लोरोफिल, भिटामिन, खनिज तत्व पाइन्छन् । हरियो सागमा मुटुको रोगदेखि कब्जियतसम्म, पेटको क्यान्सरदेखि ग-ठिया र जोर्नी तथा हड्डीका समस्यासम्म हटाउने क्षमता हुन्छ । मस्तिष्कको क्षमता बढाउन तथा बूढोपनका लक्षण हटाउन सागयुक्त भोजन निकै नै लाभदायक हुन्छ ।
च्याउ:- भिटामिन ‘बी’ का विभिन्न प्रकार र खनिज तत्व च्याउमा पाइन्छन् । सेलेनियम, तामा, फस्फोरस, पोटासियम, चिल्लो पदार्थ, कार्बोहाड्रेड भएको च्याउ उच्च कोटिको सब्जी हो । तर, यसमा ऊर्जा स्रोत (क्यालोरी)अत्यन्त कम हुन्छ ।
टिपेर जम्मा गरेको च्याउमा अल्ट्राभायोलेट (युभी) किरण दिएपछि भिटामिन डी पर्याप्त बनाउन सकिन्छ । संसारमा एक लाख ४० हजार प्रकारका च्याउ पाइन्छन् । तीमध्ये १० प्रतिशत च्याउसँग मात्र मानिसको ज्ञान र पहुँच पुगेको छ । नेपालको कर्णाली क्षेत्रका जंगलमा पाइने मोरेल, गुच्ची नामका च्याउहरू अति महँगा छन् ।
पेन्सिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिनजस्ता एन्टिबायोटिक औषधिहरू च्याउ समूहमा पर्ने विभिन्न फंगीहरूबाट सार निकालिएको कच्चा पदार्थबाट बनाइन्छ । उच्च रक्तचाप र शरीरको मोटोपन नियन्त्रण गर्न, हड्डी बलियो बनाउने भिटामिन डी पर्याप्त पाउन, शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउन च्याउ अत्यन्त राम्रो खाद्यवस्तु मानिन्छ ।
यो पनि पढ्नुस : ग्यास्ट्रिक देखि कोलेस्ट्रोल सम्मका राेगहरु केही दिनमै निकाे बनाउने बिरे नुन, यस्ताे छ प्रयाेग गर्ने तरिका
काठमाडौँ- ग्यास्ट्रिक देखि कोलेस्ट्रोल सम्मका राेगहरु केही दिनमै निकाे बनाउने बिरे नुन, यस्ताे छ प्रयाेग गर्ने तरिका (भिडियाे हेर्नुस्)। बिरेनुनकाे यति धेरै फाईदा र राेग निकाे बनाउन सक्ने सक्ति ,तपाईंले बिरेनुनका बारेमा पक्कै सुन्नु भएको होला । यो नुन विभिन्न खालको रोगमा घरेलु उपचारको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ।आयुर्वेदमा त यसको धेरै औषधिहरुमा प्रयोग हुन्छ ।
यदि कम भोक लाग्ने समस्या छ भने कालो नुनमा सलाद, दही, मोही, कागतीपानी संगै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट शरीर पनि स्वस्थ राख्न सकिन्छ र सोडियमको मात्रा पनि बढ्दैन । त्यसैले बिरेनुन स्वास्थका लागि निकै नै फाईदाजनक रहेकाे छ । एजेन्सीको सहयोगमा